"Iskaga Kaalay Kooxdan Dadka Addoonsanaysa..." Joan Laporta Oo Farriin Culus U Diray Xiddiga Brazil Ee Neymar - Laacib
HomeSuuqa Kala Iibsiga“Iskaga Kaalay Kooxdan Dadka Addoonsanaysa…” Joan Laporta Oo Farriin Culus U Diray Xiddiga Brazil Ee Neymar
“Iskaga Kaalay Kooxdan Dadka Addoonsanaysa…” Joan Laporta Oo Farriin Culus U Diray Xiddiga Brazil Ee Neymar
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Joan Laporta ayaa farriin culus u diray xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr, waxaanu kula taliyey inuu iskaga tago Paris Saint-Germain oo uu ku tilmaamay koox ciyaartoyda addoonsata iyada oo lacag isticmaalaysa.
Weerarka culus ee uu Laporta ku qaaday PSG oo imanaya maalmo kaddib markii ay kooxdaasi shaacisay heshiis cusub oo ay la gaadhay Kylian Mbappe, ayaa waxa uu ka sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta L’Esportiu.
Neymar oo shaki la gelinayo mustaqbalkiisa, lana sheegayo in Kylian Mbappe loo ballan-qaaday in laacibkan la iibinayo si uu masuuliyadda naadiga iyo hoggaamiyenimadeedba isagu u yeesho, waxaanay taasi keentay inuu u gacan-haadiyo Laporta oo ka dalbaday inuu dib ugu soo laabto Camp Nou.
Madaxweynaha Barcelona oo warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi: “Yaan jeclaadeen Neymar? Waa ciyaartoy heersare ah, dhamaan ciyaaartoydanina maalin ayay si xor ah ugu soo laaban doonaan Barcelona.
“Ciyaartoyda u saxeexay kooxaha sida PSG waxay saxeexeen in la addoonsado, lacag ayaa lagu addoonsanayaa.”
Neymar oo sannadkii 2017kii ay PSG kaga iibsatay Barcelona lacag gaadhaysay 222 milyan oo Euro ayaa illaa hadda ah ciyaartoyga ugu qaalisan dunida, hase yeeshee heshiiska cusub ee ay Paris Saint-Germain la gashay Kylian Mbappe ayaa hoos u dhigay qiimayntii badnayd ee uu kooxda ku dhex lahaa, taas oo ay u raaceen dhaawacyo xilli ciyaareedkii tegay in badan bannaanka dhigay.